တစ်ဦးကမှတ်တမ်း: အစ္စလာမ်ဘာသာ vs. ခရစ်ယာန်ဘာသာ
1189 ခုနှစ်တွင်ဖွင့်လှစ်ခြင်း, တတိယခရူးဆိတ်စစ်ပွဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ 1187 ခုနှစ်ဂျေရုဆလင်များ၏မွတ်စလင် recapture နှင့်ခေါ်ဝေါ်ခဲ့သည် Hattin မှာပါလက်စတိုင်းနိုက်၏ရှုံးနိမ့် ။ ဒါဟာနောက်ဆုံးမှာမအောင်မြင်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဂျာမဏီ၏ဖရက်ဒရစ်ငါ Barbarossa သူပင်ရောက်ရှိခဲ့သည်မတိုင်မီပြင်သစ်၏သန့်ရှင်းသောမြေနှင့်ဖိလိပ္ပု II ကိုဩဂုတ်အချိန်တိုတောင်းတဲ့ကာလပြီးနောက်အိမ်ပြန်ရေနစ်။ အင်္ဂလန်၏ရစ်ချတ်ခြင်္သေ့နှလုံးသာရှည်လျားနေကြ၏။ သူဟာနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးစာချုပ်ကောက်ချက်ချပြီးနောက်သာကျန်ရစ်ဧကနှင့်အချို့သောသေးငယ်ဆိပ်ကမ်းများဖမ်းယူကူညီပေးခဲ့သည် Saladin ။
အဆိုပါရူးဆိတ်စစ်ပွဲများ၏ Timeline ကို: တတိယခရူးဆိတ်စစ်ပွဲ & နောက်ဆက်တွဲအခြေအနေ 1186 - 1197
1186 ခုနှစ်, Chantillon ၏ Reynald မွတ်စလင်ယာဉ်တန်းတိုက်ခိုက်ခြင်းနှင့် Saladin တစ်အစ်မအပါအဝင်အများအပြားအကျဉ်းသားယူခြင်းအားဖြင့် Saladin နဲ့အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးချိုးတော်မူ၏။ ဤသည်မှာမိမိလက်နှင့် Reynald သတ်ပစ်ရန်ကတိပြုသူမွတ်စ်လင်ခေါင်းဆောင် infuriates ။
မတ်လ 3, 1186: မိုဆူးလ်မြို့, အီရတ်, Saladin မှတင်ပြ။
သြဂုတ်လ 1186: Baldwin V ကိုယေရုရှလင်မြို့ငယ်ရွယ်မင်းကြီးသည်။ တစ်ဦးနာမကျန်း၏သေ။ မယ်တော်, Sibylla ဘုရင် Baldwin IV ၏နှမ, Courtenay နှင့်သူမ၏ခင်ပွန်း Lusignan ၏ Guy ၏ Joscelin ဖြင့်ယေရုရှလင်ဘုရင်မသရဖူရရှိလျက်ရှိသည်ဘုရင်သရဖူရရှိသည်။ ဤသည်ယခင်ရှင်ဘုရင်၏အလိုတော်ကိုဆန့်ကျင်သည်။ ထရီပိုလီ၏ရေမွန်၏တပ်ဖွဲ့များကမိမိကိုမိမိတိဗေရိ၌တည်ရှိ၏ Nablus နှင့်ရေမွန်အခြေစိုက်ကြသည်; အကျိုးဆက်အဖြစ်, တစ်ခုလုံးကိုနိုင်ငံတော်သို့ထိရောက်စွာနှစ်ခုနှင့်ပရမ်းပတာစိုးစံအတွက်ခွဲဖြစ်ပါတယ်။
1192 - 1187
တတိယခရူးဆိတ်စစ်ပွဲဖရက်ဒရစ်ငါ Barbarossa, အင်္ဂလန်၏ရစ်ချတ်ငါခြင်္သေ့နှလုံးသားနှင့်ပြင်သစ်၏ဖိလိပ္ပု II ကိုဩဂုတ်ကဦးဆောင်နေပါတယ်။
မတ်လ 1187: အကျဉ်းသားများနှင့် Chantillon ၏ Reynald ကဖမ်းဆီးရမိထားကြောင်းတဲ့ယာဉ်တန်းခေါ်ဆောင်သွားခံရခြင်းကသူ့အစ်မတုံ့ပြန်ခုနှစ်, Saladin ဂျေရုဆလင်များ၏လက်တင်ခင့်နိုင်ငံတော်ဆန့်ကျင်နေတဲ့ကိုသန့်ရှင်းသောစစ်ပွဲများအတွက်မိမိအခေါ်ဆိုခကစတင်ခဲ့သည်။
မေလ 1, 118 7: မွတ်စလင်တစ်ဦးကကြီးမားသောကင်းထောက်တပ်ဖွဲ့တိုက်ခိုက်ခြင်းနှင့်အရှင်စတငျဖို့ပိုကြီးတဲ့စစ်ခွင့်ပြုထဲသို့ခရစ်ယာန်တွေကိုလှုံ့ဆျော၏ရည်ရွယ်ချက်နှင့်အတူယော်ဒန်မြစ်မြစ်ကိုဖြတ်ကူး။
အဆိုပါကျူးကျော်ရုံတစ်ခုတည်းနေ့ကနောက်ဆုံးမှဒီဇိုင်းနှင့်အဆုံးအနီးအများအပြားများစွာ Templar နှင့် Hospitallers တာပိုကြီးတဲ့မွတ်စ်လင်အင်အားသုံးတရားစွဲဆိုထားသည်။ လုံးနီးပါးခရစ်ယာန်တွေသေဆုံးခဲ့ပါသည်။
ဇွန်လ 26, 1187: Saladin ပါလက်စတိုင်းသို့ဖြတ်ကျော်ဖြင့်ယေရုရှလင်၏လက်တင်ဒမ်းသူ၏ကျူးကျော်လွှတ်တင်။
ဇူလိုင်လ 1, 1187: Saladin ဂျေရုဆလင်များ၏လက်တင်ခင့်နိုင်ငံတော်လုပ်ကြံအပေါ်ကြီးမားတဲ့တပ်မတော်ရည်ရွယ်ချက်နှင့်အတူယော်ဒန်မြစ်ဖြတ်သန်းသွားသည်။ သူ Belvoir ၏မြို့တော်အတွက် Hospitallers နေဖြင့်သတိပြုမိပေမယ့်သူတို့ရဲ့နံပါတ်များကိုလက်ပတ်နာရီကိုဒါပေမယ့်ဘာမှလုပ်ဖို့သေးငယ်လွန်းဖြစ်ပါတယ်။
ဇူလိုင်လ 2, 1187: Saladin အောက်မှာမွတ်စလင်တပ်ဖွဲ့များနန်းတော်ထဲကကျင်းပရန်စီမံခန့်ခွဲ, အရေအတွက် Raymond ရဲ့ဇနီး Eschiva ကဦးဆောင်တိဗေရိ၏မြို့ပေမယ့်တပ်, ဖမ်းဆီးဖို့။ အဘယ်သို့ပြုရမည်ကိုဆုံးဖြတ်နိုင်ရန်အတွက် Sephoria မှာခရစ်ယာန်တပ်ဖွဲ့များစခန်း။ သူတို့ကတိုကျခိုကျဖို့ခွန်အားမရှိကြပါဘူး, ဒါပေမဲ့သူတို့အထဲကကိုင်ထား Eschiva ၏ပုံရိပ်အားဖြင့်ရှေ့ဆက်ဖို့မှုတ်သွင်းနေကြသည်။ Lusignan ၏ Guy သူသည်အများနှင့်ရေမွန်သူမဖမ်းမိပါကသူ့ဇနီး၏ဖွယ်ရှိကံကြမ္မာရှိနေသော်လည်းသူ့ကိုထောက်ခံပါတယ်ရှိရာဆက်လက်ရှိနေရန်လိုသည်။ Guy သို့သော်နေဆဲသူတစ်ဦးသူရဲဘောနည်းသည်နှင့်နှောင်းပိုင်းတွင်ထိုညဉ့် Gerard, အ Knights Templar ၏ Grand Master, တိုက်ခိုက်ဖို့သူ့ကိုယုံကြည်စိတ်ချကြောင်းအခြားသူတွေရဲ့ယုံကြည်မှုအားဖြင့်နှောငျ့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကလေးနက်အမှားပါလိမ့်မယ်။
ဇူလိုင်လ 3, 1187: Saladin ရဲ့တပ်ဖွဲ့တွေထိတွေ့ဆက်ဆံနိုင်ရန်အတွက် Sephoria ကနေရူးဆိတ်စစ်သည်များမှချီတက်။
သူတို့ဟာ Hattin မှာသူတို့ရဲ့ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများ replenish ဖို့မျှော်သူတို့နှင့်အတူအဘယ်သူမျှမကရေကိုဆောင်ခဲ့၏။ ထိုညဉ့်ကိုသူတို့သာပြုလုပ်ထားပြီးခန်းခြောက်ခဲ့ရှာဖွေတွေ့ရှိရန်, ရေတွင်းတစ်တွင်းနှင့်အတူတစ်ကုန်းပေါ်မှာတပ်လိမ့်မယ်။ Saladin ကိုလည်းဖြီးမီးရှို့မည်ဟု; အဆိုပါပျံ့မီးခိုး ပို. ပင်စိတ်ဆင်းရဲမောနဲ့ရေငတ်ရူးဆိတ်စစ်သည်များမှဖန်ဆင်းတော်မူ၏။
ဇူလိုင်လ 4, 1187, Hattin ၏တိုက်ပွဲ: Saladin ရေကန်တိဗေရိ၏အနောက်မြောက်ဘက်တစ်ဦးဧရိယာအတွင်းရူးဆိတ်စစ်သည်များမှအနိုင်ယူနှင့်များ၏လက်တင်ဒမ်းအများစု၏ထိန်းချုပ်မှုယူဆ ဂျေရုဆလင် ။ အဆိုပါရူးဆိတ်စစ်သည်များမှ Sephoria ကျန်ကြွင်းစေပြီဘယ်တော့မှသင့်တယ် - သူတို့ Saladin ၏ဗိုလ်ခြေအားဖြင့်ခဲ့ကြသည်အဖြစ်သူတို့ကပူသဲကန္တာရနှင့်ရေမရှိခြင်းအားဖြင့်သလောက်ရှုံးခဲ့သည်။ ထရီပိုလီ၏ Raymond စစ်တိုက်ပြီးနောက်သူ၏အနာ၏သေသွားတယ်။ Chantillon, အန္တိအုတ်မြို့သို့မင်းသား၏ Reynald, ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ Saladin အားဖြင့်ခေါင်းဖြတ်သတ်သည်ကိုသော်လည်းအခြားအခရူးဆိတ်ခေါင်းဆောင်များပိုကောင်းကုသနေကြသည်။ Gerard က de Ridefort, အ Knights Templar ၏ Grand Master, နှင့် Knights Hospitaller ၏ Grand Master ရွေးနေကြသည်။
စစ်တိုက်ခြင်းငှါပြီးနောက် Saladin မြောက်ဘက်သို့ရွေ့လျားသွားနှင့်နည်းနည်းအားထုတ်မှုနှင့်အတူဧက, ဘေရွတ်နှင့်ဇိဒုန်မြို့များ၏မြို့ကြီးများဖမ်းယူ။
ဇူလိုင်လ 8, 1187: Saladin နှင့်သူ၏တပ်များသည်ဧကမှာရောက်လာ။ အဆိုပါမြို့ Hattin မှာမိမိအောင်ပွဲကြားပြီးလျှင်, ချက်ချင်းအထံတော်သို့ခြဲ့။ ထို့အပြင် Saladin မှလက်နက်ချသောအခြားမြို့ကြီးများကိုကောင်းစွာကုသနေကြသည်။ , ဂျက်ဖာ၏ဆန်သောအရာတစျခုမှာမြို့, အင်အားနဲ့ကျွန်စနစ်သို့ရောငျးလိုတစ်ခုလုံးကိုလူဦးရေအားဖြင့်ခေါ်ဆောင်သွားသည်။
ဇူလိုင်လ 14, 1187: Montferrat ၏ Conrad အဆိုပါ Crusading အလံကိုထူယူတုရုမြို့မှာရောက်ရှိလာသည်။ Conrad ဧကမှာဆင်းသက်ဖို့ရည်ရွယ်ခဲ့ပေမယ့် Saladin ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာတှေ့ပြီးသားသူ ပို. ကြောက်သူသည်အခြားခရစ်ယာန်ခေါင်းဆောင်ကနေကျော်ကြာဘယ်မှာတုရုမြို့မှအပေါ်လှုံ့ဆော်ပေး။ Saladin Hattin မှာ Conrad ရဲ့ဖခင်ဝီလျံဖမ်းမိခြင်းနှင့်ကုန်သွယ်ရေးကမ်းလှမ်းပေမယ့် Conrad မဟုတ်ဘဲလက်နက်ချထက်မိမိဖခင်မှာရိုက်ကူးဖို့ကိုပိုမိုနှစ်သက်ခဲ့သည်။ တုရုမြို့ Saladin အနိုင်ယူနိုင်ခြင်းနှင့်အခြားတရာနှစ်ပေါင်းကြာရှည်မယ်လို့တစ်ခုတည်းသောခရူးဆိတ်ဒမ်းဖြစ်ပါတယ်။
ဇူလိုင်လ 29, 1187: ဇိဒုန်မြို့ Saladin မှစှနျ့။
သြဂုတ်လ 09, 1187: ဘေရွတ်မြို့ Saladin ကဖမ်းဆီးရမိတာဖြစ်ပါတယ်။
သြဂုတ်လ 10, 1187: Ascalon မြို့ Saladin နှင့်မွတ်စလင်တပ်ဖွဲ့တွေဒေသအတွင်းကျော် re-တည်ထောင်ရန်ထိန်းချုပ်မှုမှစှနျ့။ အောက်ပါလအားဖြင့် Saladin ကိုလည်းဆုပတ်လည်လက်စွပ်ပြီးပါကယေရုရှလင်မြို့ Nablus, ဂျက်ဖာ၏, Toron, ဇိဒုန်မြို့, ဂါဇာနှင့် Ramla များ၏မြို့ကြီးများကိုထိန်းချုပ်မယ်။
စက်တင်ဘာ 19, 1187: Saladin Ascalon မှာစခန်းချိုးနှင့်ယေရုရှလင်ဆီသို့မိမိတပ်လှုံ့ဆော်ပေး။
စက်တင်ဘာ 20, 1187: Saladin နှင့်သူ၏တပ်များသည်ယေရုရှလင်မြို့အပြင်ဘက်ရောက်လာခြင်းနှင့်ချေမှုန်းရေးမှတမြို့လုံးကိုပွငျဆငျ။ ယေရုရှလင်မြို့ကာကွယ်ရေး Ibelin ၏ Balian ကဦးဆောင်နေပါတယ်။
Balian Hattin နှင့် Saladin မှာဖမ်းမိထွက်ပြေးလွတ်မြောက်ခဲ့ပြီးပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရသူ၏ဇနီးနှင့်ကလေးများ retrieve နိုင်ရန်အတွက်သူ့ကိုယေရုရှလင်မြို့သို့ဝင်ရန်အဘို့အခွင့်ပြုချက်ကိုပေး၏။ ပြီးတာနဲ့အဲဒီမှာသို့သော်လူအနေဖို့နဲ့သူတို့ရဲ့ကာကွယ်ရေးတက်ယူဖို့သူ့ကိုတောင်းပန် - သုံးနိုက်ပါဝင်ပါသည်တစ်ကာကွယ်ရေး, တဦးတည်း Balain ကိုယ်တော်တိုင်လည်းပါဝင်သည်လျှင်။ တခြားလူတိုင်း Hattin မှာဘေးအန္တရာယ်အတွက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရခံခဲ့ရသည်။ Balian နေဖို့ Saladin ရဲ့ခွင့်ပြုချက်ရှေ့ဆက်ဘာ, ဒါပေမယ့် Saladin ကိုလည်းသူ့ဇနီးနှင့်ကလေးများမြို့အထွက်လုံခြုံမူအကျင့်ပေးထားသောနှင့်တုရုမြို့အတွက်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုခေါ်ဆောင်သွားသည်ဟုသေချာမသာ။ ဤကဲ့သို့သောလုပ်ဆောင်ချက်များတစ်ခုမှုးမတ်များနှင့် chivalrous ခေါင်းဆောင်အဖြစ်ဥရောပတွင် Saladin ရဲ့ဂုဏ်သတင်းကိုသေချာစေရန်ကူညီပေးသည်။
စက်တင်ဘာ 26, 1187: ငါးမြို့တော်ကိုစုံစမ်းနေကြပြီ၏ရက်ပေါင်းနှင့်ချက်ချင်းဝန်းကျင်ရှိဧရိယာပြီးနောက် Saladin ရန်သူ၏ချေမှုန်းရေးလွှတ်တင် ဂျေရုဆလင်ပြန်လည်ယူ ခရစ်ယာန်ကျူးကျော်ထံမှ။ ယောက်ျားအပေါင်းတို့သည်ခရစ်ယာန်သူတို့စစ်တိုက်ခြင်းသို့မဟုတ်မဖို့ဘယ်လိုသိတယ်ဖြစ်စေ, တစ်ဦးလက်နက်ပေးထားခဲ့သညျ။ ဂျေရုဆလင်များ၏ခရစ်ယာန်နိုင်ငံသားတွေကသူတို့ကိုကယ်တင်မယ့်အံ့ဖွယ်အပေါ်အားကိုးလိမ့်မယ်။
စက်တင်ဘာ 28, 1187: မိုးသည်းထန်စွာ Battery ကိုနှစ်ရက်ကြာပြီးနောက်, ယေရုရှလင်မြို့ရိုးကိုမွတ်ဆလင်ချေမှုန်းရေးအောက်မှာ buckle မှစတင်။ စိန့်စတီဖင်ရဲ့မျှော်စင်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကျရောက်နှင့်ပြိုပျက်ရာစိန့်စတီဖင်ရဲ့ဂိတ်, အရူးဆိတ်စစ်သည်များမှနီးပါးတရာနှစ်ပေါင်းအစောပိုင်းကမှတဆင့်လည်းကျိုးခဲ့ရှိရာနေရာတစ်ခုတည်းမှာပေါ်လာဖို့ကစတင်ခဲ့သည်။
စက်တင်ဘာ 30, 1187: ဂျေရုဆလင်ကိုတရားဝင် Saladin, မြို့ဝိုင်းမူဆလင်တပ်ဖွဲ့များ၏တပ်မှူးမှလက်နက်ချသည်။ မကျြနှာကိုကယ်တင်နိုင်ရန်အတွက် Saladin တစ်မိုးသည်းထန်စွာရွေးနုတ်ဖိုးမဆိုလက်တင်ခရစ်ယာန်များ၏လွှတ်ပေးရန်ပေးဆောင်စေခြင်းတောင်းဆိုနေပြီ; ကယ်လွှတ်တော်မရနိုငျသောသူတို့ကိုကျွန်အဖြစ်ထားနေကြသည်။
သြသဒေါက်နှင့် Jacobite ခရစ်ယာန်တွေမွို့၌ဆက်လက်ရှိနေရန်ခွင့်ပြုထားသည်။ ပင်မိမိကိုမိမိလူအမြား၏လွတ်လပ်ခွင့်ကိုဝယ်ယူ - သနားခြင်းကရုဏာကိုပြသ Saladin ခရစ်ယာန်တွေကိုမှာအားလုံးအနည်းငယ်သာသို့မဟုတ်လုံးဝမရွေးနုတ်ဖိုးသွားပါစေဖို့အများကြီးဆင်ခြေကိုရှာ။ အတော်များများကခရစ်ယာန်ခေါင်းဆောင်များ, အခြားတစ်ဖက်တွင်, ကျွန်အဖြစ်ကနေအခြားအခမဲ့အသုံးပြုနိုင်မယ့်အစားဂျေရုဆလင်ထဲကရွှေနှင့်ဘဏ္ဍာကိုခိုးသွင်း။ ဤရွေ့ကားလောဘခေါင်းဆောင်များဘိုးဘေး Heraclius အဖြစ်အများအပြား Templar နှင့် Hospitallers ပါဝင်သည်။
အောက်တိုဘာ 2, 1187: ဆီးရီးယား, ပါလက်စတိုင်းနှင့်ဂျော်ဒန်မှတဆင့်ခရူးဆိတ်ပြည်နယ်အထွေထွေဒေသ: Saladin ၏ command ကိုအောက်မှာမွတ်စလင်တပ်ဖွဲ့များတရားဝင်ထိရောက်စွာလည်း Outremer အဖြစ်လူသိများသည့် Levant အတွက်မဆိုအဓိကခရစ်ယာန်ရှိနေခြင်း (အဆုံးသတ်ရေး, အရူးဆိတ်စစ်သည်များမှကနေဂျေရုဆလင်ကိုထိန်းချုပ်ကြာ ) ။ ဒါကြောင့်မွတ်စ်လင် Muhammed အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏အထံတော်၌ဖြစ်ကောင်းကင်မှဂျေရုဆလင်ကို (ရော့ခ်၏အမိုးခုံး, အထူးသ) မှတက်ပြီကြောင်းယုံကြည်လာသောအခါ၏နှစ်ပတ်လည်နေ့အပေါ်ကျကြလိမ့်မယ်ဒါကြောင့် Saladin နှစ်ရက်နေဖြင့်မြို့ထဲသို့သည်သူ၏ entry ကိုနှောင့်နှေးခဲ့ရတယ်။ နီးပါးတရာနှစ်ပေါင်းအစောပိုင်းကယေရုရှလင်မြို့ခရစ်ယာန်ဖမ်းယူမတူဘဲမရှိအစုလိုက်အပြုံလိုက်လုပ်ကြံခြင်းလည်းမရှိ - မျှသာညျသနျ့ရှငျးသောသင်္ချိုင်းတွင်းများဘုရားကျောင်းနှင့်တူခရစ်ယာန်ကွန်းယေရုရှလင်မြို့သို့ပြန်လာဘို့ခရစ်ယာန်ဘုရားဖူး '' အကြောင်းပြချက်ယူဖကျြဆီးခံရသင့်ပါတယ်ရှိမရှိနှင့် ပတ်သက်. အငွငျးပှား။ အဆုံး၌, Saladin မျှကွန်းတို့ထိခံရဖို့ရှိပါတယ်နှင့်ခရစ်ယာန်တို့၏သန့်ရှင်းသောဆိုဒ်များကိုလေးစားသင့်ကြောင်းအလေးအနက်ဆိုသည်။ ဤသည် Saladin ကိုလည်းခရစ်ယာန်များကိုအစဉ်အဆက်ကိုထပ်ယူလျှင်, သူတို့သည်နိုင်မည်မဟုတ်ပေ, ဒါကြောင့်ဖျက်ဆီးခံရဂျေရုဆလင်မြို့ရိုးရှိပါတယ် 1183. ၌သူတို့ကိုဖျက်ဆီး၏ရည်ရွယ်ချက်မက္ကာနှင့်မက်ဒီနာပေါ်ချီတက်ဖို့ Chantillon ရဲ့ပျက်ကွက်ကြိုးပမ်းမှု၏ Reynald မှချွန်ထက်မတူဘဲရပ်တည် ကကိုင်ဖို့။
အောက်တိုဘာ 29, 1187: Saladin ဖြင့်ယေရုရှလင်၏ recapture တုံ့ပြန်ခုနှစ်တွင်ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး Gregory VIII တတိယခရူးဆိတ်စစ်ပွဲတောင်းဆိုသည့် Bull Audita Tremendi ထုတ်ဝေထားသည်။ တတိယခရူးဆိတ်စစ်ပွဲဂျာမဏီ၏ဖရက်ဒရစ်ငါ Barbarossa, ပြင်သစ်၏ဖိလိပ္ပု II ကိုဩဂုတ်နှင့်ကဦးဆောင်လိမ့်မည်ဟု ရစ်ချတ်ငါ Lionheart အင်္ဂလန်၏။ အဆိုပါသိသာဘာသာရေးရည်ရွယ်ချက်အပြင်, ဂရက်ဂိုရီအဖြစ်ကောင်းစွာခိုင်မာသည့်နိုင်ငံရေးရည်ရွယ်ချက်တွေရှိပါတယ်: ပြင်သစ်နှင့်အင်္ဂလန်အကြားတွင်း, အခြားသူများအကြား, ဥရောပနိုင်ငံတို့၏ခွန်အား sapping ခံခဲ့ရသူသူတို့တစ်တွေဘုံအကြောင်းမရှိအတွက်စည်းလုံးနိုင်လျှင်, လွှဲမယ်လို့ယုံကြည်နေပါတယ် သူတို့ရဲ့စွမ်းအင်စစ်မက်နှင့်ဥရောပလူ့အဖွဲ့အစည်းထိခိုက်ပျက်ပြားစေလိမ့်မယ်လို့ခြိမ်းခြောက်မှုလျှော့ချပေးပါတယ်။ ဤသည်၌သူခေတ္တမျှအောင်မြင်ပေမယ့်ရှင်ဘုရင်နှစ်ပါးတို့သည်သာလအနည်းငယ်အဘို့မိမိတို့ကွဲပြားခြားနားမှုဘေးဖယ်ထားနိုင်ကြသည်။
အောက်တိုဘာ 30, 1187: Saladin ဂျေရုဆလင်ထဲကမိမိအမွတ်စလင်စစ်တပ်ဦးဆောင်နေသည်။
နိုဝင်ဘာလ 1187: Saladin တုရုမြို့ပေါ်မှာတစ်စက္ကန့်ချေမှုန်းရေးလွှတ်တင်, ဒါပေမယ့်ဒီတစ်ခုအဖြစ်ကောင်းစွာပျက်ကွက်။ တုရုမြို့ရဲ့ကာကွယ်ရေးတိုးတက်ခဲ့ပေမယ့်ယခုဒုက္ခသည်များနှင့်စစ်သားများနှင့်ပြည့်စုံလေ၏ဒေသတွင်း၌ဖမ်းမိအခြားမြို့များ Saladin ကနေအခမဲ့သွားကြဖို့ခွင့်ပြုခဲ့ခဲ့သာ။ ဤသည်ကစိတ်အားထက်သန်သူရဲနှငျ့ပွညျ့စုံခဲ့ကွောငျးကိုဆိုလို၏။
ဒီဇင်ဘာလ 1187: ရစ်ချတ်အင်္ဂလန်၏ Lionheart တတိယခရူးဆိတ်စစ်ပွဲတွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်လက်ဝါးကပ်တိုင်ကိုတက်ယူပြီးသဘောတူရန်ပထမဦးဆုံးဥရောပအစိုးရသောမင်းဖြစ်လာသည်။
ဒီဇင်ဘာလ 30, 1187: Montferrat ၏ Conrad, တုရုမြို့ခရစ်ယာန်ကာကွယ်ရေး၏တပ်မှူး, မြို့များ၏ဝိုင်းရံများတွင်ပါဝင်အများအပြားမွတ်စလင်သင်္ဘောများဆန့်ကျင်နေတဲ့ညဥ့်ဝင်ရောက်စီးနင်းလွှတ်တင်။ သူကထိရောက်စွာဖြစ်ခြင်းကာလဘို့ Saladin ရဲ့ရေတပ်တပ်ဖွဲ့များဖျက်သိမ်းရေး, သူတို့ကိုဖမ်းဆီးဖို့နှင့်အများအပြားကပိုဝေးလိုက်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
ဇန်နဝါရီလ 21, 1188: ပြင်သစ်၏အင်္ဂလန်နှင့်ဖိလိပ္ပု II ၏ဟင်နရီ II ကို Plantagenet တုရုမြို့ယောရှိ၏ဂိုဏ်းချုပ်ဘုန်းတော်ကြီးနားထောင်ရန်ပြင်သစ်တွင်ဖြည့်ဆည်းယေရုရှလင်မြို့၏အရှုံးနှင့်ထဲမှာ Crusade ရာထူးအများစုကိုဖော်ပြရန် သည်သန့်ရှင်းသောမြေ ။ သူတို့ကလက်ဝါးကားတိုင်ကိုတက်ယူပြီး Saladin ဆန့်ကျင်နေတဲ့စစ်တပ်လေ့လာရေးခရီးတွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်သဘောတူသည်။ သူတို့ကအစတတိယခရူးဆိတ်စစ်ပွဲရန်ပုံငွေကူညီနိုင်ရန်အဖြစ်လူသိများအထူးဆယ်စုတစု, "Saladin ဆယ်ဘို့တဘို့" စည်းကြပ်ရန်ဆုံးဖြတ်။ ဤသည်အခွန်သုံးနှစ်တွင်ကာလအတွင်းပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးရဲ့ဝင်ငွေများထဲမှဆယ်ဘို့တဘို့ရန်ပမာဏသည်; အလွန်ကြီးစွာသောစုဆောင်းရေး tool ကို - သာသူတို့သည် Crusade ကိုအပေါ်ပါဝင်ခဲ့သူကိုကင်းလွတ်ခွင့်ရှိကြ၏။
May 30, 1188: Saladin Krak des Chevalier ၏မြို့တော် (၏ဌာနချုပ်ဝိုင်းထားခြင်းရေးသားထားပါတယ် Knights Hospitaller ဆီးရီးယားနှင့်အများဆုံး Saladin ကဖမ်းဆီးရမိခဲ့မီကပင်လူအပေါင်းတို့သည်ခရူးဆိတ်ရဲတိုက်၏အကြီးဆုံး) ဒါပေမယ့်ယူပျက်ကွက်။
ဇူလိုင်လ 1188: Saladin Lusignan ၏ Guy, ယေရုရှလင်မင်းကြီးသည်လွှတ်ပေးမည်။ သူတစ်ဦးတစ်နှစ်မတိုင်မီ Hattin ၏တိုက်ပွဲမှာဖမ်းမိခဲ့သညျ။ Guy နောက်တဖန် Saladin ဆန့်ကျင်လက်နက်ကိုတက်ယူဖို့မကြိနျဆိုအောက်မှာဖြစ်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်သူတစ်ဦးအကျိုးအပြစ်ကိုခံရမည်မမှန်ကန်တဲ့ဖို့ကျိန်ဆိုခြင်းကိုပြုမိန့်တော်မူ၏သူတစ်ဦးယဇ်ပုရောဟိတ်ကိုရှာဖွေစီမံခန့်ခွဲ။ Montferrat ၏ Marquis ဝီလျံတစ်ချိန်တည်းမှာဖြန့်ချိသည်။
သြဂုတ်လ 1188: ပြင်သစ်၏အင်္ဂလန်နှင့်ဖိလိပ္ပု II ၏ဟင်နရီ II ကို Plantagenet ပြင်သစ်တွင်ထပ်မံတွေ့ဆုံရန်နီးပါးကသူတို့အမျိုးမျိုးသောနိုင်ငံရေးအသဘောထားကွဲလွဲကျော်ရိုက်ထံသို့လာကြ၏။
ဒီဇင်ဘာလ 6, 1188: Safe ၏ခံတပ် Saladin မှစှနျ့။
မြောက်အမေရိကမှနောက်ဆုံးလူသိများ Norse အလည်အပတ်ခရီးတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။
ဇန်နဝါရီလ 21, 1189: Saladin ၏ command ကိုအောက်မှာမွတ်စလင်များ၏အောင်ပွဲတုံ့ပြန်ခေါ်တတိယဘာသာရေးစစျပှဲအဘို့အတပ်ဖွဲ့ဝင်များ, ပြင်သစ်ဘုရင်ဖိလိပ္ပု II ကိုဩဂုတ်အောက်တွင်စုရုံးစတင်ခဲ့ပြီး, အင်္ဂလန်ဘုရင်ဟင်နရီ II ကို (မကြာမီသူ့သားဘုရင်အားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက် ရစ်ချတ်ငါ) နှင့်သန့်ရှင်းသောဘုရားရောမဧကရာဇ်ဖရက်ဒရစ်ဗြဲဖရက်ဒရစ်ပါလက်စတိုင်းဖို့လမ်းပေါ်လာမည့်နှစ်တွင်ရေနစ်သေဆုံး - သူသစ်တစ်ခုနှင့်တောက်ပသောအနာဂတ်ကိုဂျာမနီပြန်ဦးတည်သွားစေရန်စောင့်ဆိုင်းနေတဲ့တောင်ပေါ်မှာဝှက်ထားခဲ့ပါတယ်အခိုင်အမာကြောင့်ဖွံ့ဖြိုးပြီးဂျာမန်လူထုပုံပြင်များ။
မတ်လ 1189: Saladin ပြန်လည်ရောက်ရှိ ဒမတ်စကတ် ။
ဧပြီ 1189: Pisa ကနေငါးဆယ်နှစ်ယောက်စစ်သင်္ဘောမြို့တော်ရဲ့ကာကွယ်ရေးအတွက်အကူအညီတုရုမြို့မှာရောက်ရှိ။
မေလ 11, 1189: ဂျာမန်အုပ်စိုးသောမင်းဖရက်ဒရစ်ငါ Barbarossa တတိယခရူးဆိတ်စစ်ပွဲအပေါ်ချွတ်သတ်မှတ်။ မှတဆင့်ချီတက် ဘိုင်ဇင်တိုင်း တပြည်လုံးကိုဧကရာဇ်ဣဇာက်သည် II ကို Angelus ဟာရူးဆိတ်စစ်သည်များမှဆန့်ကျင် Saladin အတူစာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးထားပြီးဖြစ်သောကြောင့်အလျင်အမြန်လုပ်ခံရဖို့ရှိပါတယ်။
မေလ 18, 1189: ဖရက်ဒရစ်ငါ Barbarossa ဣကောနိ (ဗဟို Anatolia တည်ရှိသော Konya, တူရကီ,) ၏ Seljuk မြို့ဖမ်းယူ။
ဇူလိုင်လ 6, 1189: ဘုရင်ကဟင်နရီ II ကို Plantagenet ကွယ်လွန်နှင့်သားတော်, ရစ်ချတ် Lionheart အားဖြင့်အောင်မြင်ခဲ့သည်။ ရစ်ချတ်သာအမျိုးမျိုးသောခန့်ထားသောအရာရှိများအားမိမိနိုငျငံတျော၏အုပ်ချုပ်မှုထွက်ခွာ, အင်္ဂလန်အတွက်အချိန်အနည်းငယ်ဖြုန်းလိမ့်မယ်။ သူကအင်္ဂလန်နှင့်ပတ်သက်ပြီးအလွန်စိုးရိမ်ပူပန်မဟုတ်ခဲ့တောင်အများကြီးအင်္ဂလိပ်စာသင်ယူခဲ့ပါဘူး။ သူကပိုပြီးစိုးရိမ်ပြင်သစ်တွင်သူ၏ဥစ္စာကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်အသက်အရွယ်မှတဆင့်ကြာရှည်မယ်လို့သူ့ကိုယ်သူအမည်တစ်ခုအောင်နှင့်အတူရှိ၏။
ဇူလိုင်လ 15, 1189: Jabala Castle Saladin မှစှနျ့။
ဇူလိုင်လ 29, 1189 Sahyun Castle ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရတိုက်ခိုက်ခြင်းကိုဦးဆောင်လျက်, ခံတပ် Qalaat Saladin အမည်ပြောင်းသူ Saladin မှစှနျ့။
သြဂုတ်လ 26, 1189: Baghras Castle Saladin ကဖမ်းဆီးရမိတာဖြစ်ပါတယ်။
သြဂုတ်လ 28, 1189: Lusignan ၏ Guy မြို့တော်ရဲ့မွတ်စလင်တပ်အတွက်ထက်ဝေးသေးငယ်တဲ့အင်အားစုနှင့်အတူတံခါးတို့ကိုဧကမှာရောက်ရှိ, ဒါပေမယ့် Montferrat ၏ Conrad ကျော်တုရုမြို့များ၏ထိန်းချုပ်မှုကိုဖွင့်ဖို့ငြင်းဆန်သောကွောငျ့မိမိခေါ်ဆိုရန်မြို့ရှိသည်ဖို့စိတ်ပိုင်းဖြတ်ဖြစ်ပါသည် သူ့ကို။ Conrad, အ Balians နှင့် Garnier နေဖြင့်ပါလက်စတိုင်းအတွက်အာဏာအရှိဆုံးမိသားစုများနှစ်ခုထောက်ခံနှင့် Guy ကျီပန်းဦးရစ်သရဖူကိုဆိုမှုရေးသားထားပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်။ Montferrat ၏ Conrad ၏အိမ်တော်နောက်ထပ်ခရူးဆိတ်စစ်ပွဲများ၏ခေါင်းဆောင်များအကြားနိုင်ငံရေးဆက်ဆံရေးရှုပ်ထွေးခြင်း, Hohenstaufen နှင့် Capetians တစ်ခုမဟာမိတ်မှဆက်စပ်ဖြစ်ပါတယ်။
သြဂုတ်လ 31, 1189: Lusignan ၏ Guy ဧက၏ကောင်းစွာကာကွယ်မြို့ဆန့်ကျင်ကာချေမှုန်းရေးလွှတ်တင်နှင့်ယူပျက်ကွက်ကား, မိမိအားထုတ်မှုသို့ streaming သူတို့၏အမျိုးအပါဆုံးဆွဲဆောင် ပါလက်စတိုင်း တတိယခရူးဆိတ်စစ်ပွဲတွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်။
စက်တင်ဘာ 1189: ဒိန်းမတ်နှင့်ဖရီစီရစစ်သင်္ဘောများပင်လယ်အားဖြင့်ထိုမြို့ကို blockading အားဖြင့်ဝိုင်းရံတွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်ဧကမှာရောက်လာ။
စက်တင်ဘာ 3, 1189: ရစ်ချတ်ဟာ Lionheart Westminster မှာအခမ်းအနားများတွင်အင်္ဂလန်ရှင်ဘုရင်သရဖူရရှိသည်။ ယုဒလူတို့လက်ဆောင်များနှင့်အတူရောက်လာသည့်အခါသူတို့က, တိုက်ခိုက်ခဲ့အဝတ်အချည်းစည်းကိုချွတ်, ပြီးတော့လန်ဒန်၏ဂျူးသုံးလပတ်အတွင်းအိမ်များမီးရှို့ရန်လှုံ့ဆော်ပေးရာတစ်ဦးလူအုပ်စုများကကြာပွတ်နေကြသည်။ ခရစ်ယာန်အိမ်များမီးမဖမ်းသည်အထိအာဏာပိုင်များအမိန့်ကိုပြန်လည်ဖေါ်ထုတ်ရန်အတွက်ရွှေ့ကြပါ။ အောက်ပါလများတွင်ရူးဆိတ်စစ်သည်များမှအင်္ဂလန်တစ်လျှောက်လုံးယုဒလူရာပေါင်းများစွာကိုသတ်။
အဆိုပါရူးဆိတ်စစ်သည်များမှများ၏ကြီးထွားလာခြိမ်းခြောက်မှုအားဖြင့်အုတ်အုတ်သဲသဲစက်တင်ဘာ 15, 1189 ဧကပြင်ပတွင်စားခန်းချကြ၏, Saladin ပျက်ကွက်သောခရူးဆိတ်စခန်းတခုတခုအပေါ်မှာတိုက်ခိုက်မှုလွှတ်တင်။
အောက်တိုဘာ 4, 1189 Montferrat ၏ Conrad အားဖြင့် Joined, Lusignan ၏ Guy နီးပါး Saladin ရဲ့တပ်ဖွဲ့တွေ routing အတွက်အောင်မြင်ထားတဲ့ဧကခုခံကာကွယ်မွတ်စလင်စခန်းတခုတခုအပေါ်မှာတိုက်ခိုက်မှုလွှတ်တင် - ဒါပေမယ့်ကိုသာခရစ်ယာန်တွေကိုသူတို့တွင်မိုးသည်းထန်စွာထိခိုက်သေဆုံးမှု၏ကုန်ကျစရိတ်မှာ။ ဖမ်းမိခြင်းနှင့်ဦးသေဆုံးသူတွေထဲမှာ Gerard က de Ridefort ယခင်ကဖမ်းယူခဲ့ပြီးတော့ Hattin ၏တိုက်ပွဲအပြီးပယ်ရွေးခဲ့တဲ့ Knights Templar ၏မာစတာဖြစ်ပါတယ်။ Conrad ကိုယ်တော်တိုင်နီးပါးအဖြစ်ကောင်းစွာဖမ်းမိခဲ့ပါတယ်, ဒါပေမဲ့သူကသူ့ရန်သူ Guy အားဖြင့်ကယ်ဆယ်ခဲ့သည်။
ဒီဇင်ဘာလ 26, 1189: တစ်ခုကအီဂျစ်ရေတပ်ဧက၏ဝိုင်းထားမြို့ရောက်ရှိပေမယ့်နိုင်ခြင်းတို့သည်ပင်လယ်ထဲပိတ်ဆို့ရုတ်သိမ်းပေးရန်ရန်။
ဂျေရုဆလင်ဘုရင်မ Sibylla ကွယ်လွန်နှင့် Lusignan ၏ Guy ဂျေရုဆလင်၏နိုငျငံတျော၏တစ်ဦးတည်းသောအုပ်ချုပ်မှုကိုဆိုပါတယ်။ သူတို့သမီးနှစ်ယောက်စလုံးပြီးသား Sibylla ရဲ့ညီမ Isabella နည်းပညာပိုင်းအများအပြား၏မျက်စိထဲမှာဆက်ခံခဲ့သည်ဆိုလိုတာကတစ်ဦးရက်အနည်းငယ်မတိုင်မီရောဂါကွယ်လွန်သွားခဲ့သည်။ Tyreal အတွက် Conrad ဒါသို့သော်ရာဇပလ္လင်မလုပ်ပဲနှင့်အုပ်စိုးသူကိုကျော်ရှုပ်ထွေးသည့်ခရူးဆိတ်တပ်များသည်အပိုင်းသုံးပိုင်း။
အဆိုပါ Teutonic Knights လည်းဧကအနီးရှိဆေးရုံဖန်တီးသောသူပါလက်စတိုင်းအတွက်ဂျာမန်တို့ကထူထောင်လျက်ရှိသည်။
မတ်လ 07, 1190: ရူးဆိတ်စစ်သည်များမှ Stamford, အင်္ဂလန်မှာယုဒလူတို့သတ်။
မတ်လ 16, 1190: York ကအင်္ဂလန်မှာယုဒလူတို့ဗတ္တိဇံပေးရန်တင်ပြရှိခြင်းကိုရှောင်ရှားနိုင်ရန်အတွက်အစုလိုက်အပြုံလိုက်သတ်သေ။
မတ်လ 16, 1190: York မှာယုဒလူတို့ဖြစ်ကြောင်း သတ်ဖြတ် သည်သန့်ရှင်းသောမြေများအတွက်ချွတ်တင်ထားရန်ပြင်ဆင်နေရူးဆိတ်စစ်သည်များမှဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ အတော်များများကသူတို့ကိုယ်သူတို့အသတ်ခံထက်ခရစ်ယာန်များ၏လက်သို့ကျလိမ့်မည်။
မတ်လ 18, 1190: တစ်သောင်းကျန်းအပေါ်ရူးဆိတ်စစ်သည်များမှစိန့် Edmond, အင်္ဂလန်သင်္ဂြိုဟ်အတွက် 57 ယုဒလူတို့ကိုသတ်။
ဧပြီလ 20, 1190: ဖိလိပ္ပု II ကိုဩဂုတ်ပြင်သစ်၏တတိယခရူးဆိတ်စစ်ပွဲတွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်ဧကမှာရောက်ရှိလာသည်။
ဇွန်လ 10, 1190: မိုးသည်းထန်စွာလက်နက်ဝတ်ဆင်, ဖရက်ဒရစ် Barbarossa တတိယခရူးဆိတ်စစ်ပွဲများ၏ဂျာမန်တပ်များသည်ဆိတ်ကွယ်ရာလဲကြနှင့်မွတ်စလင်တိုက်ခိုက်မှုအားဖြင့်ပျက်စီးသည့်နောက်, Cilcia အတွက် Saleph မြစ်မှာ drowns ။ ပထမနှင့်ဒုတိယအခရူးဆိတ်စစ်ပွဲအတွင်းဗိုလ်ခြေမတူဘဲဂျာမန်စစ်တပ်ကအလေးအနက်အရှုံးမရှိဘဲ Anatolia လွင်ပြင်ကိုဖြတ်ကူးဖို့စီမံခဲ့ Saladin ဖရက်ဒရစ်ပြီးမြောက်စေခြင်းငှါ, အဘယ်သို့သောအကြောင်းသည်အလွန်စိုးရိမ်ပူပန်ကြောင့်ဤသည်အထူးသဖြင့်ကံဆိုးခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးတော့မူလ 100,000 ဂျာမန်စစ်သားတစ်ဦးမျှသာ 5,000 ဧကကပါစေ။ ကဖွယ်ရှိတစ်ဦးရဲ့အောင်မြင်မှုပါပြီမယ်လို့နှင့် Saladin ကမွတ်စလင်အစဉ်အလာအတွက်ထိုကဲ့သို့သောလေးစားသူရဲကောင်းဖြစ်လာကြပါပြီမဟုတ်ဘူး - ဖရက်ဒရစ်တတိယခရူးဆိတ်စစ်ပွဲ၏တစ်ခုလုံးကိုသင်တန်းပြောင်းလဲခဲ့ကြပေသည်အသက်ရှင်ခဲ့ရသည်။
ဇွန်လ 24, 1190: ဖိလိပ္ပုသည်ပြင်သစ်နှင့်ရစ်ချတ်၏ II ကို Vezelay မှာအင်္ဂလန်ချိုးစခန်း၏ Lionheart နှင့်တရားဝင်တတိယခရူးဆိတ်စစ်ပွဲစတင်, သန့်ရှင်းသောမြေများအတွက်ပယ်ဦး။ အတူတူသူတို့ရဲ့ဗိုလ်ခြေ 100,000 ကျော်ယောက်ျားစုစုပေါင်းခန့်မှန်းနေကြသည်။
အောက်တိုဘာ 4, 1190: ကသူ့စစ်သားတစ်ဦးအရေအတွက်ကို Anti-အင်္ဂလိပ်အဓိကရုဏ်းဦးသေဆုံးနေကြသည်ပြီးနောက်ရစ်ချတ်ငါ Lionheart Messina, စစ္စလီကျွန်းကိုဖမ်းယူဖို့သေးငယ်တဲ့အင်အားစုစေပါတယ်။ ပြင်သစ်၏ရစ်ချတ်နှင့်ဖိလိပ္ပု II ကိုအောကျရူးဆိတ်စစ်သည်များမှဆောင်းရာသီမှာအဘို့အစစ္စလီကျွန်းများတွင်တည်းခိုမည်ဖြစ်သည်။
နိုဝင်ဘာ 24, 1190: Montferrat ၏ Conrad တစ်တွန့်ဆုတ် Isabella, အစ်မ Sibylla, Lusignan ၏ Guy ၏ကွယ်လွန်သူဇနီးလက်ထပ်။ ဒီအိမ်ထောင်ကိုနှင့်အတူ (သူသာရှိသောကြောင့် Sibylla ရန်သူ၏မူရင်းလက်ထပ်ထိမ်းမြား၏ကျင်းပပေးသော) ဂျေရုဆလင်၏ရာဇပလ္လင်မှ Guy ရဲ့ပြောဆိုချက်ကိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းတွေပိုပြီးအရေးတကြီးလုပ်ခဲ့ကြသည်။ နောက်ဆုံးတော့နှစ်ခု Conrad Guy Conrad ကူးဇိဒုန်မြို့, ဘေရွတ်, တုရုထိန်းချုပ်လှည်လဲလှယ်အတွက်ဂျေရုဆလင်၏ဦးရစ်သရဖူမှ Guy ရဲ့ပြောဆိုချက်ကိုအသိအမှတ်ပြုတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့ကွဲပြားခြားနားမှုဖြေရှင်းနိုင်ကြသည်။
ဖေဖော်ဝါရီလ 5, 1191: ရှည်တကျီကျီရန်ငြိုးထားခြင်း, ရစ်ချတ် Lionheart နှင့် Tancred, စစ္စလီကျွန်း၏ရှင်ဘုရင်အချေမှုန်းရန်ရန်အလို့ငှာ, Catania မှာအတူတူဖြည့်ဆည်း။
မတ်လ 1191: ပြောင်းဖူးနှင့်အတူတင်ဆောင်တစ်ဦးကသင်္ဘောရူးဆိတ်စစ်သည်များမှမျှော်လင့်ချက်ပေးခြင်းနှင့်ဝိုင်းထားခြင်းကိုဆက်လက်ခွင့်ပြု, ဧက၏အပြင်ဘက်ခရူးဆိတ်တပ်ဖွဲ့တွေများအတွက်ရောက်ရှိလာသည်။
မတ်လ 30, 1191: ပြင်သစ်ဘုရင်ဖိလိပ္ပုသည်စစ္စလီကျွန်းအရွက်များနှင့် Saladin ဆန့်ကျင်သည်သူ၏စစ်ဆင်ရေးစတင်ညျသနျ့ရှငျးသောမြေများအတွက်ရွက်သတ်မှတ်။
ဧပြီလ 10, 1191: အင်္ဂလန်ဘုရင်ရစ်ချတ် Lionheart ဂျေရုဆလင်များ၏လက်တင်နိုငျငံတျော၏ကျန်ကြွင်းသောအရာကိုရွက် setting, 200 ကျော်သင်္ဘောတစ်စင်းနှင့်အတူစစ္စလီကျွန်းကနေထွက်ခွာ။ သညျခရီးသူ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်, ပြင်သစ်၏ဖိလိပ္ပု၏အဖြစ်နီးပါးဒီတော့အေးဆေးတည်ငြိမ်မြန်ဆန်မဟုတ်ပါဘူး။
ဧပြီလ 20, 1191: ဖိလိပ္ပု II ကိုဩဂုတ်ပြင်သစ်၏ရူးဆိတ်စစ်သည်များမှဝိုင်းဧကအကူအညီရောက်ရှိလာသည်။ ဖိလိပ္ပုကဝိုင်းရံအင်ဂျင်တည်ဆောက်ခြင်းနှင့်မြို့ရိုးပေါ်မှကာကွယ်စောင့်ရှောက်နှောင့်ယှက်သည်သူ၏အချိန်အများကြီးသုံးစွဲသည်။
မေလ 6, 1191: ရစ်ချတ်ဟာ Lionheart ရဲ့ခရူးဆိတ်စင်းကိုသူကျွန်းမိမိသိမျးပိုကျစတင်ခဲ့သည်ရှိရာဆိုက်ပရပ်စ်အတွက် Lemesos (ယခု Limassol) ၏ port ကိုရောက်ရှိလာသည်။ ရစ်ချတ်ပါလက်စတိုင်းမှစစ္စလီကျွန်းကနေခရီးသွားလာခဲ့ပေမယ့်ပြင်းစွာသောအမုန်တိုင်းကသူ့စင်းကိုအရပ်ရပ်ကွဲပြားကြ၏။ မိမိဘဏ်ဍာနှင့် Navarre ၏ Ferengaria, အင်္ဂလန်၏အနာဂတ်ဘုရင်မ၏အမြောက်အများသယ်ဆောင်ရှိသူများအပါအဝင် Rhodes မှာစုဆောင်းသင်္ဘောပေမယ့်စုံတွဲတစ်တွဲ၏အများစုဟာ, ဆိုက်ပရပ်စ်မှလွခဲ့ကြသည်။ ဤတွင်ဣဇာက်သည် Comnenus shabbily သူတို့ကိုကုသ - သူကသူတို့ကိုရေအတှကျကမ်းခြေလာရန်ခွင့်ပြုရန်ငြင်းဆန်ခြင်းနှင့်ပျက်စီးတစ်ခုသင်္ဘော၏သင်္ဘောသားထောင်ချခံခဲ့ရသည်။ ရစ်ချတ်အားလုံးအကျဉ်းသားများလွှတ်ပေးရေးနှင့်အားလုံးခိုးယူဘဏ္ဍာကိုတောင်းဆိုပေမယ့်ဣဇာက်ကိုငြင်းဆန်ခဲ့သည် - မိမိနောက်ပိုင်းမှာနောင်တရန်။
May 12, 1191: အင်္ဂလန်၏ရစ်ချတ်ငါ Navarre ၏ Berengaria, Navarre ဘုရင် Sancho VI ကို၏ပထမဦးဆုံးဖွားသမီးလက်ထပ်။
ဇွန်လ 1, 1191: ဖလန်းဒါးစ်၏အရေအတွက်ဧက၏ဝိုင်းရံနေစဉ်အတွင်းဦးသေဆုံးသည်။ ယေရုရှလင်မြို့ကျဆုံး၏ပထမဦးဆုံးအစီရင်ခံစာများဥရောပမှာကိုကြားခဲ့ခြင်းနှင့်အရေအတွက်လက်ဝါးကပ်တိုင်ကိုတက်ယူနှင့်ခရူးဆိတ်စစ်ပွဲတွင်ပါဝင်ရန်သဘောတူရန်ပထမဦးဆုံးတဦးဖြစ်ခဲ့ဖူးပြီးကတည်းက Flemish စစ်သားများနှင့်မှူးမတ်တတိယခရူးဆိတ်စစ်ပွဲအတွက်အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ဍကစားခဲ့သည်။
ဇွန်လ 5, 1191: ရစ်ချတ်ငါ Lionheart Famagusta, ဆိုက်ပရပ်စ်ထွက်ခွာ, သန့်ရှင်းသောမြေများအတွက်ရွက်သတ်မှတ်။
ဇွန်လ 6, 1191: ရစ်ချတ် Lionheart, အင်္ဂလန်၏ရှင်ဘုရင်က, တုရုမြို့မှာရောက်ရှိပေမယ့် Montferrat ၏ Conrad ရစ်ချတ်မြို့အဝင်ခွင့်ပြုပါရန်ငြင်းဆန်။ ရစ်ချတ် Conrad ရဲ့ရန်သူ, Lusignan ၏ Guy နှင့်အတူဘက်ခဲ့ကြောင်းနှင့်ဒါကမ်းခြေပေါ်စခန်းစေခြင်းဖြစ်သည်။
ဇွန်လ 7, 1191: အ Crusading တပ်ဖွဲ့များ၏ကျန်တမြို့လုံးကိုဝိုငျးထားရှိရာ Montferrat ၏ Conrad ၏လက်မှာမိမိကုသမှုနှင့်အတူအော့နှလုံးနာ, ရစ်ချတ် Lionheart ဧကများအတွက်တုရုမြို့နှင့်အကြီးအကဲများထွက်ခွာမည်။
ဇွန်လ 8, 1191: ရစ်ချတ်ငါအင်္ဂလန်၏ Lionheart အဆိုပါကူညီမည် 25 ရဲလှေတွေနဲ့ရောက်ရှိ ရူးဆိတ်စစ်သည်များမှ ဝိုင်းဧက။ ရစ်ချတ်ရဲ့နည်းဗျူဟာကျွမ်းကျင်မှုနှင့်စစ်ရေးလေ့ကျင့်ရေးရစ်ချတ်ဟာခရူးဆိတ်တပ်များ command ကိုယူခွင့်ပြု, ကြီးမားတဲ့ခြားနားချက်ပါစေ။
ဇူလိုင်လ 2, 1191: အင်္ဂလိပ်သင်္ဘောများ၏ကြီးမားသောရေတပ်မြို့ဝိုင်းရံဘို့စစ်ကူနှင့်အတူဧကမှာရောက်ရှိလာသည်။
ဇူလိုင်လ 4, 1191: ဧကကမ်းလှမ်းမှုကို၏မွတ်စ်လင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်သည့် Crusaders သို့လက်နက်ချဖို့, ဒါပေမယ့်သူတို့ရဲ့ကမ်းလှမ်းချက်ကိုငြင်းပယ်သည်။
ဇူလိုင်လ 08, 1191 အင်္ဂလိပ်နှင့်ပြင်သစ်ရူးဆိတ်စစ်သည်များမှဧကရဲ့နှစ်ခုခုခံကာကွယ်နံရံပြင်ဘက်မှာထိုးဖောက်မှစီမံခန့်ခွဲ။
ဇူလိုင်လ 11, 1191 Saladin အဆိုပါ 50,000 ခိုင်မာတဲ့ခရူးဆိတ်စစ်တပ်ဝိုင်းဧကပေါ်တွင်တစ်တွေနောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်ခြင်းချေမှုန်းရေးလွှတ်တင်ပေမယ့်မှတဆင့်ကိုချိုးဖျက်ဖို့ပျက်ကွက်။
ဇူလိုင်လ 12, 1191: ဧကရစ်ချတ်ငါအင်္ဂလန်နှင့်ပြင်သစ်၏ဖိလိပ္ပု II ကိုဩဂုတ်၏ Lionheart မှစှနျ့။ ဝိုင်းထားခြင်း6ဂိုဏ်းချုပ်, 12 ဘိရှော့စဉ်အတွင်း, 40 Earl 500 Baron နှင့် 300,000 စစ်သားအသတ်ခံရအစီရင်ခံရသည်။ ဧက 1291 သည်အထိခရစ်ယာန်လက်၌ဆက်လက်ရှိနေလိမ့်မယ်။
သြဂုတ် 1191: ရစ်ချတ်ငါ Lionheart ကြီးခရူးဆိတ်စစ်တပ်ကြာနှင့်ပါလက်စတိုင်း၏ကမ်းခြေကိုဆင်းနိမ်ရောဓ။
သြဂုတ်လ 26, 1191: ရစ်ချတ်ငါ Lionheart မွတ်စလင်စစ်တပ်များ၏ရှေ့ဆက်ရာထူးများ၏ရှေ့မှောက်၌နာဇရက်မြို့သားလမ်းပေါ်သို့, ဧကထဲက 2,700 မွတ်စလင်စစ်သားနိမ်ရောဓ, သူတို့တဦးတည်းအားဖြင့်တဦးတည်းကွပ်မျက်ခံရရှိပါတယ်။ Saladin ဧက၏လက်နက်ချဖို့ကိုဦးဆောင်နဲ့ Richard ဟာနှောင့်နှေးတည်လျှင်အဘယ်သို့ဖြစ်မည်ကို၏သတိပေးအတိုင်းဤဆိုလိုတယ်ဖူးသောသဘောတူညီချက်သူ့ရဲ့ဘေးထွက်ဖြည့်ဆည်းအပေါ်နှောင့်နှေးနေတဲ့လတစ်လထက်ပိုပြီးအဘို့အရှိခဲ့ပါတယ်။
စက်တင်ဘာ 7, 1191, Arsuf ၏တိုက်ပွဲ: ရစ်ချတ်ငါခြင်္သေ့နှလုံးသားနှင့် Hugh, Burgundy ၏ Duke, Arsuf အတွက် Saladin, 50 မိုင်ယေရုရှလင်မြို့မှ Jaffaabout အနီးရှိမြို့ငယ်တစ်မြို့အားဖြင့်ချုံခိုတိုက်ခိုက်နေကြသည်။ ရစ်ချက်ကဒီအဘို့ပြင်ဆင်ခဲ့ကြောင်းနှင့်မူဆလင်တပ်ဖွဲ့များရှုံးနိမ့်နေကြသည်။
မွတ်စ်လင်တစ်ဦးရမ်းထားသောနယူးဒေလီ Sultan တည်ထောင်, ရမ်းထားသောနယူးဒေလီနှင့်မြောက်ပိုင်းနှင့်အရှေ့အိန္ဒိယနောက်ပိုင်းမှာအားလုံးအောင်နိုင်။ ဟိန္ဒူမွတ်စလင်မင်းတို့လက်ထဲမှာနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းမှုအများအပြားကာလခံရလိမ့်မယ်။
ဇန်နဝါရီလ 20, 1192: ဆောင်းရာသီမှာရာသီဥတုစဉ်အတွင်းဂျေရုဆလင်တစ်ဦးဝိုင်းထားခြင်းကိုပညာမဲ့ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးနောက်, ရစ်ချတ်ဟာ Lionheart ရဲ့ခရူးဆိတ်တပ်များ Crusaders သို့ကြောင့်ငြင်းပယ်နိုင်ရန်အတွက်ယခင်တစ်နှစ် Saladin အားဖြင့်ဖြိုဖျက် Ascalon ၏ပျက်စီးမြို့, သို့ရွှေ့ပါ။
ဧပြီ 1192: ဆိုက်ပရပ်စ်၏လူဦးရေဟာသူတို့ရဲ့မင်းအရာရှိ, ပု Knights Templar ဆန့်ကျင် revolts ။ ရစ်ချတ်ဟာ Lionheart သူတို့ကိုဆိုက်ပရပ်စ်ရောင်းချခဲ့ဖူးသော်လည်း, သူတို့သည်သူတို့၏မြင့်အခွန်ကောက်ခံမှုများအတွက်လူသိများရက်စက်ကြမ်းကြုတ် overlords ခဲ့ကြသည်။
ဧပြီလ 20, 1192: Monteferrat ၏ Conrad ရှငျဘုရငျကိုရစ်ချတ်ယခုဂျေရုဆလင်၏ရာဇပလ္လင်ပေါ်မှာကသူ၏ပြောဆိုချက်ကိုထောက်ခံကြောင်းသိလာကြတယ်။ ရစ်ချတ်သည်ယခင်က Lusignan ၏ Guy ထောက်ခံခဲ့ကြပေမယ့်သူဒေသခံ Baron အဘယ်သူအားမျှမဆိုလမ်းအတွက် Guy ထောက်ခံကြောင်းလေ့လာသင်ယူသောအခါ, ထိုသူတို့ကိုဆန့်ကျင်ဖို့မရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ အထဲကခြိုးဖောကျရာမှတစ်ဦးပြည်တွင်းစစ်တားဆီးနိုင်ဖို့အတွက်ရစ်ချတ်နောက်ပိုင်းတွင်သူ၏အမျိုးအနွယ်သည်အခြားရာစုနှစ်နှစ်ခုကအုပ်ချုပ်ဖို့ဆက်လက်မယ်လို့ Guy မှဆိုက်ပရပ်စ်ကျွန်းရောင်းလိမ့်မယ်။
ဧပြီလ 28, 1192: Montferrat ၏ Conrad, ယခင်နှစ်လ, သူ့ယုံကြည်မှုကိုရရှိနိုင်ရန်အတွက်ဘုန်းတော်ကြီးများအဖြစ် စုပေါင်း. ခဲ့သောလုပ်ကြံခံရ၏ဂိုဏ်းနှစ်ခုအဖွဲ့ဝင်များကအသတ်ခံရသည်။ လုပ်ကြံခံရ Saladinagainst အတူရူးဆိတ်စစ်သည်များမှဘက်မ - မယ့်အစား, သူတို့က Assassin ဘဏ္ဍာကိုရှေ့တော်၌ထိုနှစ်တွင်တစ် shipload မိမိဖမ်းယူပြန် Conrad ပေးဆောင်ခဲ့သည်။ Conrad သေများနှင့် Lusignan သူ့ရဲ့ပြိုင်ဘက် Guy ပြီးသားဖြုတ်ချခဲ့သောကြောင့်, ယေရုရှလင်မြို့လက်တင်ဒမ်း၏ရာဇပလ္လင်ယခုလစ်လပ်ဖြစ်ခဲ့သည်။
မေလ 5, 1192: Isabella ယေရုရှလင်မြို့ဘုရင်မကြီးနှင့် Montferrat ၏ယခုကွယ်လွန် Conrad (လုပ်ကြံခြင်းမပြုမီတစ်လသတ်ဖြတ်) ၏ဇနီး, ရှန်ပိန်၏ဟင်နရီလက်ထပ်။ ခရစ်ယာန်ရူးဆိတ်စစ်သည်များမှအကြားနိုင်ငံရေးနှင့်လူမှုရေးတည်ငြိမ်မှုကိုသေချာစေရန်သကဲ့သို့တစ်ဦးကမြန်မြန်ဆန်ဆန်လက်ထပ်ထိမ်းမြားဒေသခံ Baron နေဖြင့်တိုက်တွန်းလိုက်သည်ခဲ့သည်။
ဇွန်လ 1192: ရစ်ချတ်၏ command ကိုအောက်မှာရူးဆိတ်စစ်သည်များမှဂျေရုဆလင်ပေါ်တွင်ခြင်္သေ့နှလုံးချီတက်။ ဒါပေမဲ့သူတို့ကပြန်လှည့်နေကြပါတယ်။ အဆိုပါခရူးဆိတ်အားထုတ်မှုအလေးအနက်ထားသူတို့ရဲ့မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးကာလအတွင်းရူးဆိတ်စစ်သည်များမှအစားအစာနှင့်ရေကိုငြင်းပယ်ထားတဲ့ Saladin ရဲ့ပူလောင်-မြေကြီးတပြင်နည်းဗျူဟာအားဖြင့်မလွယ်ကူခဲ့ကြသည်။
စက်တင်ဘာ 2, 1192: ဂျက်ဖာ၏၏စာချုပ်တတိယခရူးဆိတ်စစ်ပွဲများ၏ရန်လိုမုန်းတီးမှုအဆုံးသတ်လိုက်တယ်။ ရစ်ချတ်ငါခြင်္သေ့နှလုံးသားနှင့် Saladin အကြားစေ့စပ်ညှိနှိုင်း, ခရစ်ယာန်ဘုရားဖူးပါလက်စတိုင်းနှင့် inJerusalem တဝိုက်ခရီးသွားလာ၏အထူးအခွင့်အရေးများပေးသနားနေကြတယ်။ ရစ်ချတ်ပထမဦးဆုံးတဦးတည်း၏အတာရောက်ရှိလာခဲ့ပေမယ့်မပေးသည့်အခါအခွအေနကိုကျော်ကာတိုးတက်မှု - ရစ်ချတ်ဟာ Daron, ဂျက်ဖာ၏၏မြို့ကြီးများ, ဧကနှင့် Ascalon ကိုဖမ်းယူဖို့လည်းစီမံခန့်ခွဲခဲ့ရတယ်။ နိုငျငံတျော ofJerusalem ကြီးမားသောသို့မဟုတ်လုံခြုံဘယ်တော့မှခဲ့သော်လည်းယခုအခါအလွန်အားနည်းခဲ့နှင့်မည်သည့်အချက်မှာကုန်းတွင်းပိုင်းထက်ပိုမို 10 မိုင်အကွာမရောက်နိုင်ဘူး။
အောက်တိုဘာ 9, 1192: ရစ်ချတ်ငါခြင်္သေ့နှလုံး, အင်္ဂလန်၏အကဲအမှူး, အိမ်အဘို့သန့်ရှင်းသောဘုရားမြေထွက်ခွာ။ ပြန်လမ်းတွင်သူသြစတြီးယား၏ Leopold အားဖြင့်ဓားစာခံယူတတ်သူ 1194 သည်အထိနောက်တဖန်အင်္ဂလန်ကိုမမွငျပါဘူး။
မတ်လ 3, 1193: Saladin ကွယ်လွန်နှင့်သူ၏သားတို့သည်အဲဂုတ္တုပြည်၌ပါဝင်ပါသည်သော Ayyubid အင်ပါယာ၏ထိန်းချုပ်မှုကိုယူတော်မူလိမ့်မည်ကျော်စစ်တိုက်ခြင်းငှါစတင် ပါလက်စတိုင်း, ဆီးရီးယားနှင့်အီရတ်အချို့ကို ။ Saladin ရဲ့သေခြင်းလျင်မြန်စွာလုပ်ကြံခြင်းနှင့်ခရစ်ယာန်သောမင်းတို့ခဏကြာကြာဆက်လက်တည်ရှိခွင့်ပြုခံရခြင်းမှယေရုရှလင်မြို့လက်တင်ခင့်နိုင်ငံတော်ကယ်တင်သောအရာကိုဖြစ်နိုင်သည်။
မေလ 1193: ဟင်နရီ, ယေရုရှလင်မင်းကြီးသည်။ Pisan ခေါင်းဆောင်များတုရုမြို့အပေါ်မှာယူဆိုက်ပရပ်စ်၏ Guy နှင့်အတူလျှို့ဝှက်ကြံစည်ခဲ့ခဲ့တွေ့ရှိ။ ဟင်နရီတာဝန်ရှိသူတွေကိုဖမ်းဆီး, ဒါပေမယ့် Pisan သင်္ဘောများလုံးဝ Pisan ကုန်သည်ထုတ်ပယ်ဖို့ဟင်နရီအတင်းအကျပ်, လက်တုံ့ပြန်မှုအတွက်ကမ်းခြေကိုကြူးကျြောစတင်ဖို့။
နောက်ဆုံး Seljuk ဆူလ်တန်, Toghril ဘင် Arslan, အ Khwarazm-Shah က Tekish စစ်တိုက်ဦးသေဆုံးသည်။
ဖေဖော်ဝါရီလ 20, 1194: Tancred, စစ္စလီကျွန်းများ၏ရှင်ဘုရင်သည်သေဆုံးသည်။
ဆိုက်ပရပ်စ်၏ Guy ၏သေခြင်း, မူလက Lusignan ၏ Guy နှင့်ယေရုရှလင်၏လက်တင်နိုငျငံတျော၏ရှင်ဘုရင်အတစ်ကြိမ်။ Lusignan ၏ Amalric, Guy ရဲ့အစ်ကို, သူ့ဆက်ခံအမည်ရှိဖြစ်ပါတယ်။ ဟင်နရီ, ယေရုရှလင်မင်းကြီးသည်။ Amalric အတူစာချုပ်ပါစေနိုင်သည်။ Amalric ရဲ့သားသုံးယောက်လည်းဟင်နရီ၏သမီးခဲ့ကြသည်နှစ်ခုသောအ Isabella ၏သမီးသုံးယောက်, လက်ထပ်ဖြစ်ကြသည်။
Alexius III ကိုသူ့ကိုမျက်စိကွယ်ခြင်းနှင့်ထောင်ထဲမှာသူ့ကိုချပြီး, သူ့အစ်ကိုဘိုင်ဇန်တီယမ်၏ဧကရာဇ်ဣဇာက်သည် II ကို Angelus deposes ။ Alexius အောက်ရှိဘိုင်ဇင်တိုင်းအင်ပါယာဆိတ်ကွယ်ရာလဲစတင်ခဲ့သည်။
1195 တိုက်ပွဲ Alacros ၏: Almohad ခေါင်းဆောင် Yaqib Aben Juzef (စ El-Mansur အဖြစ်လူသိများ "ဟုအဆိုပါအောင်ပွဲခံ") Castile ဆန့်ကျင်တဲ့ဂျီဟတ်ရန်တောင်းဆိုလိုက်သည်။ သူကအာရပ်, အာဖရိကန်နှင့် Alacros အတွက်အယ်လ်ဖွန်ဆို VIII ၏တပ်ဖွဲ့များကဆန့်ကျင်အခြားသူတွေနဲ့ချီတက်ပွဲပါဝငျသောဧရာမစစ်တပ်တို့ကိုစုဝေးစေ။ ခရစ်ယာန်စစ်တပ်စှာရှီယာဖြစ်ပါတယ်နှင့်၎င်း၏စစ်သားအမြောက်အများအတွက်သတ်နေကြသည်။
သူက Livonia အတွက်ဒေသခံအယူမှား (ခေတ်သစ်လတ်ဗီးယားနှင့်အက်စ်တိုးနီးယား) ဆန့်ကျင်နေတဲ့ Crusading စစ်တပ်သတ်မှတ်သည့်အခါ Berthold, Buxtehude ၏ဘိရှော့ (Uexküll), ဘောလ်တစ်ရူးဆိတ်စစ်ပွဲများ၏ပထမဦးဆုံးလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခလွှတ်တင်။ အတော်များများကအတင်းအကြပ်အောက်ပါနှစ်တာကာလအတွင်းပြောင်းလဲနေကြသည်။
1198 - 1197
ဂျာမန်ပါလက်စတိုင်းတစ်လျှောက်လုံးဧကရာဇ်ဟင်နရီ VI ကိုပစ်လွှတ်တိုက်ခိုက်မှုများ၏ command ကိုအောက်မှာရူးဆိတ်စစ်သည်များမှ, ဒါပေမယ့်မဆိုသိသာရည်မှန်းချက်များအောင်မြင်ရန်ရန်ပျက်ကွက်။ ဟင်နရီဖရက်ဒရစ် Barbarossa ၏ခေါင်းဆောင်တစ်ဦး၏သားဖြစ်ပြီး ဒုတိယ Crusade ကို သူ၏တပ်ဖွဲ့များဘာမှပြီးမြောက်နိုင်နှင့်ဟင်နရီသည်မိမိအဘကိုစတင်ခဲ့ရာအပြီးသတ်ဆုံးဖြတ်ခဲ့မတိုင်မီဝမ်းနည်းစရာကောင်းတာကပါလက်စတိုင်းဖို့လမ်းအပေါ်ရေနစ်သူကို။
စက်တင်ဘာ 10, 1197
ရှန်ပိန်၏ဟင်နရီ, ယေရုရှလင်မင်းကြီးသည်။ သူကမတော်တဆတစ်လသာဆောင်ကနေလဲသောအခါဧကအတွက်သေဆုံးသည်။ ဒါဟာအသေခံရန် Isabella ၏ဒုတိယခင်ပွန်းဖြစ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါခရူးဆိတ်မြို့ ofJaffa al-Adil, Saladin ရဲ့အစ်ကို၏ command ကိုအောက်မှာမွတ်စလင်တပ်ဖွဲ့များကခြိမ်းခြောက်ခံရခြင်းကြောင့်အခြေအနေကအရေးပေါ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုက်ပရပ်စ်၏ Amalric ငါဟင်နရီရဲ့ဆက်ခံသူအဖြစ်ရွေးချယ်ထားသည်။ Isabella ယေရုရှလင်မြို့ Amalric ငါ၏သမီးကိုလက်ထပ်ပြီးနောက်။ သူ Amalric II ကိုယေရုရှလင်မြို့နှင့်ဆိုက်ပရပ်စ်ရှင်ဘုရင်ဖြစ်လာသည်။ ဂျက်ဖာ၏ဆုံးရှုံးခဲ့ရလိမ့်မည်ဟု, ဒါပေမယ့် Amalric II ကိုဘေရွတ်နှင့်ဇိဒုန်မြို့ဖမ်းယူနိုင်ဖြစ်ပါတယ်။
'' ဘုရားသခင်မဲ့ဝါဒီ '' မြို့တော် Be သငျ့သညျမအဘယ်ကြောင့်
တစ်နှစ်တာဆုချီးမြှင့် Winners ၏ဥရောပခရီးစဉ်လူသစ်
အီရတ်တွင်ဗိသုကာပညာ - စစ်သားအဖြစ်စောကဘာလဲ
PowerPoint အတွက်အခမဲ့ဂိမ်းပြရန် Templates ကို
အဆိုပါသတ္တမအိမ် - နက္ခတ်ဗေဒင်အိမ်များ
အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့်လုံခြုံရေးနှင့်အတူအမျိုးသမီးများနေ့ကိုစိုးရိမ်အကောင်းဆုံး Apps ကပ
ယောသပ်သည်-လူးဝစ် Proust အတ္ထုပ္ပတ္တိ
ပိုကောင်းတဲ့ပွဲဦးထွက်: ဂျေကိုးလ်သို့မဟုတ် Drake?
အငြင်းပွားဖွယ်ရာ Tie-Down ကြိုးအတွက် PRCA နည်းဥပဒေပြောင်းလဲခြင်းဝန်းရံ
Coptic အဘိဓါန် Orthodox ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း
တရုတ်နှစ်သစ်ကူး Lantern Wish
Ted Cruz အကြောင်း $ 3.6 သန်းတန်ဖိုးရှိဖြစ်ပါသည်
အဆိုပါစစ်ပြန်အပိုဆုကြည်းတပ်၏ 1932 ခုနှစ်မတ်လ
ဖက်ဒရယ်အစိုးရအသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်း Programs ကိုအပြင် Set